Rio 2016: Astaanta xarigga iyo cabashada orodyahan Lilesa – Kasmo Newspaper
Rio 2016: Astaanta xarigga iyo cabashada orodyahan Lilesa
Updated - August 22, 2016 10:13 am GMT
Orodyahanka orodka dheer ee Itobiya Feyisa Lilesa ayaa sare u qaaday gacmihiisa oo is weydaarsan,markii uu soo gaaray xarriiqa dhammaadka orodka,markii la guddoonsiinayay billadda iyo markii aaladaha iPhone-ka sawirro looga qaadanayay.
Sheekooyin dhaadheer ayaa ka hari doona cayaaraha Olimbikada Rio 2016 oo giddigood dhacdooyin Isboorti ah,laakiin midda Lilesa waa ka qoto dheertahay orodka dheer,wuxuuna shir jaraa’id ku qabtay,meel an ka fogayn,xarriiqa dhammaadka.
Waxaa uu muujinayay astaan cabasho oo la mid ah kuwa lagu arki jiray dariiqyada Addis Ababa,malmihii dibadbaxyadu soconayeen. Waxaa uu sheegay in xubno badan oo qoyskiisa ka mid ah la dilay,qaar kalana la waayay,sida aabihiis.
“Haddii an laabto waa la I dilayaa,ama xabsi xanuun badan ayaa la igu ridi doonaa” ayuu sheegay,wuxuuna 42 kiilomitir ordayay,isaga oo culayska iyo welwelka uu leeyahay go’aankiisa madaxa ku haya.
Wuxuu waliba galay kaalinta 2aad,isaga oo daba ordayay horyaalka an la loodin Karin ee Kenya,Eliud Kipchoge,oo an ka warqabin cabashadiisa,wuxuuna ku sameeyay waliba 2.9.45 saacadood.
Billaddiisa Qalinka ah wuxuu rabaa in uu sidii Baasaboor oo kale u isticmaalo,isaga oo ku soo biiri doona kooxdii Qarammada Midoobay iyo Guddiga Olimbikada Caalamiga ah u xuleen,in ay matalaan qaxootiga.
Sida Yonas Kinde,oo sidiisa oo kale Itobiya ka soo jeeda,laakiin bari hore ka soo cararay,kana mid ah hadda kooxda 10ka qof ah ee magaca qaxootiga uga qaybgalaysa Rio 2016.
Tillaabada saamayn doonta mustaqbalka Lilesa,waxaa ay matalaysaa cabashada qowmiyadda Oromo oo dareensan ciriiri uga imanaya xukuumadda Itobiya,qaar badanna laga laayay,lagana xiray.
Lilesa waxaa uu af ingiriis jajab ah isku dayay in uu xaalad qaylodhaan ah ku cabbiro,isaga oo sheegay in reer Galbeedku caawiyo xukuumad dadkiisa dulmi iyo cadaadis ku haysa. Waxaa uu Rio soo gaaray isaga oo halyey Qaran ah,laakiin wuxuu ka tagayaa isaga oo qaxooti ah,halkii nasiibkiisu geeyaba.